Qaramada M. oo Xuutiyiinta Yaman ku eedeeyay in ay la shaqeeyaan Al-Qaacida iyo Daacish | Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed
Qaramada M. oo Xuutiyiinta Yaman ku eedeeyay in ay la shaqeeyaan Al-Qaacida iyo Daacish
Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay, oo tixraaceysa war qoraal ah oo ka soo baxay dowladda Yaman ayaa sheegtay in uu jiro xiriir iyo iskaashiga ka dhexeeya maleeshiyada Xuutiyiinta iyo ururada argagixisada Daacish iyo Al Qaacidada.
Warku wuxuu intaa ku daray in maleeshiyada Xuuthiyiinta ay dhawaan sii daayeen 252 oo maxaabiis Al-qaacida ah, iyo sidoo kale mid ka mid ah dadkii ka danbeeyay qorshaha weerarkii Markabkii USS Cole, taasoo muujineysa in Xuuthiyiinta ay xariir adag la leeyahiin Al Qaacidada.
Sido kale warbinta ayaa intaa ku dartay in 55 xubnood oo Al-qaacida ah oo ku sugan magaalada Sanca ay hoostagaan kooxda Xuutiyiinta.
Warbixinta ayaa muujisay in xiriirka Xuutiyiinta iyo ururada argagixisada uu gaarey heerkii ugu sareeyay, oo ay ka mid yahiin wada shaqeyn iyo xog isweydaarsi si loo wiiqo xasilloonida iyo midnimada shacabka Yaman.
Warqaddan ay Dawladda Yaman u gudbisay Golaha Amaanka ee Q.M, ayaa ku taariikheysneed 30-ka bashan Maarso, kaa oo ka koobnaa 21 bog oo ku qoran saddex luqadood oo kala ahaa Carabi, Ingiriis iyo Faransiis.
Previous articleMadaxweynaha Tanzania oo u magacaawday wasiirkii maaliyadda madaxweyne ku xigeen
Next articleRasaas culus oo laga maqlay meel u dhaw xarunta madaxtooyada Niger